चर्चित सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेको आज जन्मदिन: यस्ता छन् धेरैलाई थाहा नभएका उनका जीवनका आरोह अवरोह ! Happy Birthday Rabi Lamichhane???????? – Naya Kura Daily
आज चर्चित सञ्चारकर्मी रबि लामिछानेको जन्म दिन परेको छ । विकिपिडयाका अनुसार रविको जन्मदिन आज परेको हो ।
रबि लामिछाने अहिले सबैको मन मुटुमा बसेका छन् । उनले गरेका कामहरु उदाहरणिय छ । उनको साथमा करौडौ जनता छन् । उनी नेपाली युवाको आइडल मानिन्छन् ।
पूर्वपत्नी इशा र छोरीसँग अमेरिकामा रम्दै रवि
यो वर्ष रवि लामिछानेका लागि चुनौतीपूर्ण रह्यो । आफ्नै पूर्व सहकर्मी शालिकराम पुडासैनीले आत्महत्या गर्नु अघि भिडियो बाहिर आयो । जसमा रवि लामिछानेसहित युवराज कँडेल र अस्मिता कार्कीका कारण आत्महत्या गरेको भनिएको छ । यसैका आधारमा प्रहरीले तीनैजनालाई आत्महत्याको दुरुत्साहनमा पक्राउ गर्यो । रवि लामिछाने पक्राउ घटनाले देशभित्र र बाहिर समेत चर्चा पायो । रवि लामिछानेलाई अदालतले धरौटीमा छाड्न आदेश दियो । उनी नायकको शैलीमा हिरासतबाट निस्किए ।
लामिछाने लोकप्रीय रेडियो पत्रकार हरिशरण लामिछानेका भाई हुन् । हरिशरणको आवाज धेरैका लागि परिचित नै छ । रविको नाम चर्चामा आएको केही वर्षमात्र भएको छ । हरिशरणले रवि अप्ठ्यारोमा पर्दा खुबै साथ दिए । उनले अभिभावकका रुपमा भाईका लागि योगदान पुर्याए ।
Prevश्रीमतीले छोडपत्रका लागि दवाव दिएपछि विराटनगरका डाक्टर शाहले गरे ८ तलबाट कुदेर आत्महत्या
Nextछानोबाट घरभित्र दुईवटा ठूला अजिङ्गर खसेपछि…
सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिकामा दुई घर पुरिए, ५ बेपत्ता